Nkume dị oké ọnụ ahịa: kedu ihe ha bụ, njirimara na mbido | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka otu ihe sitere na eriri afọ nke ụwa anyị yana nke so na otu ihe ndị ụwa na-achọsi ike n'ụwa. Ọ bụ ihe gbasara nkume dị oké ọnụ ahịa. Ha bụ ihe nwere oke mma na ọtụtụ nkọwa ọ bara uru nke anụ ahụ na nke uche n'ihi nkwenye na akụkọ mgbe ochie na-eso nkume ndị a.
Ya mere, anyị ga-arara isiokwu a iji gwa gị njirimara niile, mbido na ntụnyere nke nkume dị egwu.
1 Kedu ihe bụ nkume dị egwu
2 Gemstone nhazi ọkwa
3 Njirimara na njirimara
Kedu ihe bụ nkume dị egwu
Nke mbụ bụ ịmata ihe kpatara atụmatụ nkume dị iche iche. Ọ bụ maka nke ahụ ịnweta, ihe na-abụghị nke ịnweta na nkume nke ejirila mee ngwa dị iche iche na ụlọ ọrụ ọla, nka na dị ka nkume ịchọ mma na onye sitere na ala jikọrọ ọnụ. Ekele maka nkume ndị a ị nwere ike ịme mgbaaka, ọla aka, agbụ, ihe nkedo, olu, wdg.
Maka ihe a ga-ewere dị ka nkume dị oke ọnụ ma ọ bụ dị oke ọnụ, ọ ga-emerịrị ụfọdụ njirimara na njirimara. N'ime njirimara ndị a niile, anyị ga-agụnye ekweghị ekwe, ịma mma, ụcha, nchapụta, nkwụsi ike na ụkọ. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na obere nkume dị oke ọnụ, karịa ego ọ ga-aba na ahịa. Aha ọzọ enyere ihe ndị a bụ mkpuru, ọla na ọtụ.
Ha sitere na okwute, mineral, iko ma ọ bụ ngwaahịa okike ndị ọzọ nwere ike ịchacha ma ọ bụ bepụ iji mepụta uwe dị mma. Anyị anaghị achọ ịzụta mgbanaka dị elu, anyị ga-achọ nke nwere ezigbo nkume nwere agwa ọma. A na-ejikwa ụfọdụ n’ime ha iji theomi izu ole na ole ebe ha nwere otu ụdị ma ha enweghị otu izu oke na mma.
N'ozuzu, ihe ka ọtụtụ n'ime ha na-esiri ike ma, ọ bụ ezie na ha nwere ike ịnweta mineral dị nro, a na-enye ha ihe ịchọ mma maka ịma mma na ụkọ ha.
Gemstone nhazi ọkwa
Dị ka a tụrụ anya, dabere na mmalite na njirimara, enwere ike ịkekọrịta nkume dị oke ọnụ na ọkara dị oke ọnụ. Dị ka o kwesịrị ịdị, a na-ekewa ha na nkume ndị na-enweghị ihe ịnweta, nkume ndị na-edozi ahụ na mineraloids. Ka anyị hụ ihe e ji mara onye nke ọ bụla n’ime ha:
Nkịtị ịnweta mmanụ: ha niile bụ ndị a na-ewere dị ka mineral na-enweghị atụ. Ihe eji mara ha bu ihe nwere usoro ihe eji eme ka aru ya na ihe omuma ya. Ejirila okike nweta okwute ndị a na - enweghị bekee. Ha na-abụkarị ndị nkịtị na ọtụtụ na ọdịdị. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị mere na ha anaghị enwekarị ọnụ ala karịa ka ọ dịkwa oke ọnụ ahịa.
Nkume ndị dị ndụ: bụ ndị na-adịghị ewere dị ka mineral. Ihe kpatara nke a bụ na a kpụrụ ha site na usoro ndụ nke ihe dị ndụ. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere nkume amba nke emere site na jụrụ ọtụtụ afọ resin site na osisi oge ochie. Dị ka ị nwere ike ịtụ anya, ụdị nkume a bara ezigbo uru karịa ndị na-adịkarị. Ma ọ bụ na ọtụtụ puku na ọtụtụ puku afọ ga-agafe maka resin a na-eti mkpu n'ụzọ dị otú a. Pearl bụ ihe atụ ọzọ nke nkume dị egwu. Emeela ya site na ihe omumu nke oysters.
Nkume mineral: Ha niile bụ ihe ndị ahụ na - abụghị mineral ebe ọ bụ na ha enweghị usoro kristal ma ọ bụ ngwakọta kemịkalụ akọwapụtara nke ọma. N'ebe a, anyị na-ahụ otu ndị opals na ndị isi awọ.
Njirimara na njirimara
Zọ kachasị mma iji kee oke nkume niile bụ ime nke a site na agba ha, njirimara ha, na njirimara ha. Anyị ga-ahụ ụfọdụ njirimara ndị na-eme ka ihe ndị a bụrụ ihe pụrụ iche. Maka ihe a ga-ewere dị ka nkume dị oke ọnụ, ọ ga-ezute ụfọdụ njirimara na njirimara na-eme ka ọ bụrụ ihe nwere àgwà pụrụ iche n'ụzọ nkịtị. Ka anyị hụ ihe njirimara na njirimara ndị a:
Mma: a na-enye mma site na ọdịdị ya na agba ya. Ọ metụtara na nghọta ma ọ bụ nchapụta. Iji mee nnukwu nkume nwere mma dị elu, ọ dị mkpa ịgụnye kemịkal na ha. Ọ dị ezigbo mkpa ka ị nwee ike ịme ya ka ọ mara mma na ndepụta ndị na-azụ ahịa.
Anwụ ngwa ngwa: anwụ ngwa ngwa nwere ikike iguzogide ịkpụcha ya na onye ọzọ ma ọ bụ megide nsogbu ọ bụla ma ọ bụ nrụgide ọ bụla. I nwekwara ike inwe ekele maka nguzogide nke ihe a site na iji kemịkal dị iche iche na ojiji ọ na-adịkarị kwa ụbọchị.
Agba- enwere ike iwere ya dị ka njirimara kachasị mkpa ị ga-enwerịrị nnukwu uru. N'etiti nkume ndị a na-achọkarị nkume anyị nwere ndị nwere akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mara mma, ọbara ọbara na-acha anụnụ anụnụ. Ndị kacha nta na-achọsi ike na-acha ọcha, uzo na nwa. Ekwesịrị m iburu n'uche ihe ụtọ nke ọ bụla.
Ihie: na-ezo aka n'ikike igosipụta ìhè n'ihu ha ma ọ bụ n'elu ha. A na-etinye ha na ntụgharị uche, ntụgharị, ịgbasa na ịkekọrịta ọkụ na-abịa site na gburugburu ebe obibi. Ọ bụrụ na nnukwu nkume nwere ike ikwe ka ìhè gafere na kristal, a na-ewere ya dị ka nkume nwere ogo dị elu. Ozo doro anya, ọ ga - eri ala, a ga - ere ya na obere ego.
Maka ụkọ anyị ga-arara paragraf ma ọ bụ ihe toro ogologo ebe ọ bụ na ọ nwere ihe isi ike nke nkume a ga-achọta mgbe achọrọ na ọ gafeela ọtụtụ afọ. Ọ baghị uru anyị nwere na nkume dị elu na njirimara niile a kpọtụrụ aha n’elu ma ọ bụrụ na enweghị ike ịchọta ya. Ihe ndị a bara uru na-abụkarị ihe pụrụ iche na ọ dịghị mkpa ihe ọnụahịa ahụ bụ, Have ga-enyocha usoro nke emere iji nwee ike ịtụgharị okwute a n'ime ọla.
Nkume dị ụkọ na sie ike ịchọta, ọ na-adịkarị oke ọnụ ma na-achọsi ike. Mmadu choro ka o nwee nsogbu kachasi ike. Ọ bụ otu n'ime ihe kpatara ejiri kesaa obere okwute n'ụwa. Naanị ndị ahụ nwere ike ịkwụ ụgwọ ihe ọ na-efu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere nkume dị egwu na njirimara ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Nkume dị oké ọnụ ahịa